ukwakha ukuqeqeshwa kungeza umakhi wokwakha ukwakhiwa kwamanzi-diender
KuModemu ye-Metselen Basic Techniques, uzokala futhi ulinganisise ubukhulu. Uzofunda izinsimbi zokulinganisa futhi usebenzise imidwebo yobuchwepheshe. Uzofunda nokudala udoti, ubunikazi, izakhi ezincane ezakhiweni zobumbano bese wengeza. Uma usuqedile le moduli, ungenza umsebenzi oqashwe ngokulingana. Ngomqashi wakho, ungasiza umamanzi owaziwayo ukwakha udonga noma ukukala ukuvula iwindi. Ungaqhubeka esitezi nasemisebenzini yokulandelela yohlelo lokwakha.
Esikhathini se-Module Yokufaka Isitembu, uzothola ukuthi ungayenza kanjani ukulungiswa kwemikhumbi nokuthi ungalungisa kanjani umsebenzi ohlangene.
Ufunda ukwenza amalunga, ukwakha izakhi zokwakha bese ujoyina izici zobuso.
Ufunda ukulungisa nokuqedela okungeziwe.
Esigodini sesimiso, uzongena ekujuleni komsebenzi wokulungisa nokulungiselela.
Ufunda ukwenza ukwengeza okungeziwe, wenze izengezo, ubuyisele futhi uqede.
Ukubuyisela amajoyina kwenziwa kakhulu ngesikhathi sokuvuselelwa. Ukwengeza izindonga ezintsha kuwumsebenzi owawutholile ngaphambilini ekwakhiweni okusha (okude).
Ukwakha ukuqeqeshwa kuthatha isilinganiso iminyaka emibili kuya kwemihlanu.
Ngesitifiketi se isitha Uyaqiniseka ngomsebenzi?
Uma ufuna ukwenza ngokukhethekile, ungaqhubeka nokusebenza njengoba mason.
Amasoni anesithakazelo kakhulu emakethe yomsebenzi.
Akufanele ube nolwazi olukhethekile lwangaphakathi ohlelweni lwezinga.